MNO sirreeffamtoonni 2,345 dhiifamaan gadi lakkifaman – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMNO sirreeffamtoonni 2,345 dhiifamaan gadi lakkifaman
MNO sirreeffamtoonni 2,345 dhiifamaan gadi lakkifaman
Pirezidaanti Lammaa Magarsaa hidhamtoota 2345 dhiifamaan gadi dhiisan
Pirezidaantiin Mootummaan naannoo Oromiyaa (MNO) namoota 2,345 mana hidhaa naannichaa keessa turaniif dhiifama taasisuun, himatisaanii adda citee gadhiifamuu isaanii Biiroon Haqa Oromiyaa BBC’f mirkanneesse.
Hidhamtoota kanneeniif dhiifama kan godhan
(bbcafaanoromoooduu) –Biiroo Haqaa Oromiyaatti Hoogganaan Komminikeeshinii Obbo Taayyee Danda’aa akka jedhanitti, namoota dhiifamni godhameef 2,345 kanneen keessaa namoonni 1,538 kan itti murtaa’ee adabbii isaanii xumuraa jiraniidha.
Namoonni 250 ta’an ammoo warra himannaan abbaa alangaatiin itti banamee beellamaan deddeebi’aa turaniidha. Kanneen hafan 557 ammoo warra poolisiidhaan qabamanii qoratamaa jiranii dhiifamni kan godhameefidha.
”Namoonni Pirezidaantii naannichaa Obbo Lammaa Magarsaatiin dhiifamni taasifameef hundinu namoota himatni isaanii siyaasaan wal qabateedha,” jedhan Obbo Taayyee Danda’aa.
‘Dhimma hidhamtoota siyaasaa agarsiisuu isaanii qofaan hidhaman irratti ejjennoon mootummaa naannoo Oromiyaa kan mootummaa federaalaatiin adda miti’ kan jedhan Obbo Taayyeen, kan amma dhiifamni godhameef garuu murteedhuma naannochaatiin ta’uu ibsaniiru.
Koreen hoji raawwachiiftuu ADWUI yeroo darbe hidhamtoonni dhimma siyaasaatiin hidhaman hundi ni hiikamu jedhee murteessus naannoo Oromiyaa keessa galee hidhamtoota hinhiiku. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa aangoo qabutti fayyadamee tarkaanfii hidhamtootaaf dhiifama gochuu eegale kana itti fufas jedhaniiru.
”Hidhamtoota dhimmi isaanii siyaasaan wal qabatu hiikuun dirree siyaasaa babal’isuudha, dimokiraasiin akka cimuu fi araarri biyyoolessaa akka bu’u akkasumas misoomni biyyattii akka si’atuuf faayidaa olaanaa qaba,” jedhan Obbo Taayyeen.
Namni kamuu haga yakka hin hojjetinitti siyaasa keessatti waan hirmaateef hidhamuu hin qabu, dubbiin siyaasaan walqabate ammas murtee barbaada jedhan Obbo Taayyeen
Namoonni dhiifamni godhameef kunneen dhimmi isaanii kan siyaasaan walqabateedha, kanneen yakka gurguddaa dalagan, lubbuu namaarraan miidhaa ga’anii fi yakkoota biroo siyaasaan ala ta’an raawwatanii hidhaman garuu murteen isaanii akkaatuma seeraatiin raawwatama jedhan. Kanneen dhiifamni godhameef leenjii haaromsaa erga fudhatanii booda ni hiikamus jedhaniiru.
BBC Afaan Oromoo Raadiyoon tamsaasa Wiixata eegaluuf